Lenovo ga-ebuputa 5G mbu nke nwere Snapdragon 855 | Gam akporosis
Netwọk 5G bụ otu n'ime teknụzụ njikọ atụ anya nke ukwuu na ekwentị,, ebe ọ bụ na, dị ka anyị maara nke ọma, a kwadobeghị ya na ekwentị ọ bụla n'ahịa, uru dị na nbudata na ibudata ọsọ ọsọ dị iche. N’agbanyeghị nke ahụ, ọ gaghị abụ n’afọ na-abịa abịa ka akwụkwọ a nke mbụ ga-abịa.
Yiri agbụrụ oghere, ọtụtụ ndị nrụpụta na-arụ ọrụ ugbu a na-emepe emepe ha ma nwee olile anya ị ga-eweta ọnụ tupu ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Nke a bụ ihe banyere Lenovo, nke, dịka nkwupụta ndị osote onye isi ala, Chang Cheng, kwuru na Weibo, netwọkụ mmekọrịta ndị China, ga-enye mbido nke mbụ iji kwado netwọkụ a yana Qualcomm's Snapdragon 855.
Eziokwu ahụ bụ na 5G mobile rutere na onye nọchiri Qualcomm's SD845 bụ ihe ezi uche dị na ya. Ihe mgbawa ọzọ ga-abata na modem nwere ike ịkwado netwọkụ a., na mgbakwunye na imeziwanye na ngalaba niile fọdụrụnụ, site na ọsọ na arụmọrụ na ike ya.
Emebebeghị aha ma ọ bụ usoro nke ọdụ a ga-abata, ebe ọ bụ na ụzọ ka dị ogologo. Otu ụzọ, aturu anya iru na onwa mbu nke 2019 ebe ọ bụ, ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ nke mbụ, ọ ga-atụ anya na a ga-amalite nke Samsung na Oppo mobiles unofficially ọkwa maka nke abụọ nkeji iri na ise.
Chọpụta: Qualcomm malitere imepụta otutu nke Snapdragon 855
Dị dịka Huawei, OnePlus, Nokia, Samsung, Oppo, Vivo, ZTE na Nokia na-arụkwa ọrụ na mmepe ekwentị 5G., nke pụtara na ha ga-ewetara anyị smartphones na Snapdragon 855. Onye ọ bụla ga-eweta ọnụ kwuru ọnụ na-esote afọ, nke anyị tulee ọtụtụ malite na ahịa na nke a technology, ihe iseokwu nke na-ada anyị dị ka ozi ọma nke ga-materializing nnọọ ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Lenovo ga - ebido ekwentị 5G mbụ nwere Snapdragon 855
Chọọ maka akụ dị egwu na dungeons dị omimi nke Relic Looter